IMicrobrewery Equipment List-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Uluhlu lwezixhobo zeMicrobrewery
Ixesha: 2021-12-28 I ngxelo: 33
1) Ilitye lokusila.
Ukuba uthenga ilitye lokusila, ilitye lokusila eline-roller ezintathu lingcono kodwa lixabisa kakhulu. Ikhatshu lemalt leenkozo kufuneka lahlulwe ngokulinganayo kwaye nalo lingaguquki kakhulu ukuhluza ngokufanelekileyo imash kuso sonke isihlazana. Iirola ezintathu zinika iziphumo ezilungileyo kakhulu.
Unokufumana i-malt esele igayiwe okanye uzahlule eyakho ukuze uhlaziyeke kunye nokonga iindleko. Ifanele utyalo-mali kwaye ngokuqinisekileyo iya konga imali. I-augur inokuba negalelo lokufudusa imalt yakho ngqo kwi-mash tun, ngokungenakuthintelwa ukusindisa umsebenzi.
2) Inkqubo yeMash-Lauter.
Emva kokugquma, sebenzisa ubungakanani obuchaziweyo bamanzi kwi-mash ukuzisa umthamo wewort ukuya kumthamo.
Kuya kubakho impompo yombane yentsimbi engenastainless ukuze idluliselwe. Ngokuqinisekileyo uya kuyitshisa imbiza ngegesi okanye ngebhoyila yokufudumeza esembindini yomphunga.
Iketile yile, yimbiza enkulu yokutshisa. Ifakwa umoya kunye nesilingi kwaye iya kuba ngumlilo othe ngqo kunye nesitshisi segesi okanye ibe neebhatyi zomphunga ezizisongayo. Umphunga uthembeke ngakumbi.
Umsebenzi wawo ophambili kukufudumeza amanzi okucudisa. Abenzi botywala bakhuhla ngaphakathi kwiitanki zokugcina ngokucoca okushushu kwe-caustic.
Itanki yotywala epholileyo isebenza, kunye nokunethezeka. Andizange ndibenayo, ncwina. Ugcina amanzi apholileyo kuphela ukupholisa i-wort emva kokubilisa.
3) ubushushu umtshintshi.
Itanki yotywala ebandayo ifika ngokufanelekileyo.
Kukho i-double-bank exchanger heat exchangers ezona zithembekileyo. Bapholisa amanzi angenayo nge-glycol kuqala, mhlawumbi ukuphelisa imfuno yetanki ye-Cold-Liquor.
4) Iinkqubo zokuvundisa.
Izivundisi ziinqanawa apho wort ekrwada ijika ibe yibhiya. Njengoko kubonwe kwifoto, ziyi-cylindroconical. Bane-45-60° Ikhowuni ekhuthaza ukuhla kwezinto eziqinileyo nje ukuba igwele liphelele: igwele elifileyo, iiproteni ezisempilweni, iihops, kunye negwele eliphilileyo nelilungeleleneyo. Oku kukucoca ngokufanelekileyo ibhiya.
Le yenye yezinto ezitya ixesha lokwenza utywala. Ukuvutshelwa kuya kuhlala iintsuku ezi-7-14 kwii-ales kunye neentsuku ezingama-21-35 kwiibhiya. Ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ube nezixhobo zokubilisa ezaneleyo ezisetyenzisiweyo kwaye ulungele ukuthenga kunye nokugcina umkhondo wokuqhubela phambili kwebhiya yakho.
5) Brite amatanki.
Iitanki zeBrite zizikhongozeli zebhiya ezisetyenziselwa ukugcinwa, ukulungiswa, i-carbonation, kunye nokupakishwa kwemveliso. Baza kuba neziseko zokutya kunye neeglasi zokubona (ityhubhu yeglasi encinci eqhuba umphakamo othe nkqo wesikhongozeli). Kananjalo baya kuba namazibuko elitye le-carbonation kunye needick ezingumzekelo (ii-spigots ezincinci) zokumisela imiqulu ye-CO2.
Azibizi kakhulu kunezivundisi njengoko iziseko zeresiphi zinodonga olunye kwaye zilula ukuzenza kuneecones.
I-Brewpubs iya kunika ibhiya evela kwizikhongozeli zaseBrite. Kulo mzekelo, uhlawula irhafu ngokusekelwe kubungakanani kwitanki. Abavelisi botywala ngokuqinisekileyo baya kuhlawula izibophelelo zerhafu ngokusekelwe kwinto eyenza ukuba ibe kwipalethi kunye nokungena ngaphakathi, nokuba yintsimbi, isitya, okanye iplani yeglasi.
6) Inkqubo yokupholisa.
Izikhongozeli zebhiya zineebhatyi zokupholisa. Zizintsimbi eziphindwe kabini, zikhuselekile kwaye zinamacandelo amakhulu okuhamba kwesipholisi-propylene glycol.
I-Glycol chilling igcina ibhiya izinzile kwaye ikhusela ukukhula kweentsholongwane kwaye ilungiselela ukuthengiswa kwebhiya.
7) Iivalvu kunye neeHoses ngokunjalo.
Uzakufuna i-100' kunye ne-1.5-- 2" Brewers kunye ne-Vintners kwakhona ithumbu lokuhambisa sanitary. Baqala ukusuka kwi-30 yeedola nganye kwi-SS yomgangatho ophantsi we-SS barbed tri-clamp ukuya kwi- $150 kwimveliso yobisi ekumgangatho ophezulu efakelweyo ehambelana nokuncinci ukuya. akukho mlebe wangaphakathi.
I-ID ye-200 'i-ID efakwe ityhubhu yegesi eyomeleziweyo iyafuneka kwi-cellaring, ukondla i-CO2 kunye ne-O2 kuzo zonke iimbombo ze-brewery.
Ibhabhathane, ingqukuva, uxinzelelo, kunye nezinye iintlobo ezintandathu zeevalvu zihlala zibandakanya izixhobo zakho. Kungumbono olungileyo ukuba nokongeza.
Ungafumana ubhedu kunye nokuvalwa kobhedu kwiivenkile zemibhobho zasekhaya. Ezi ziqhele ukusetyenziselwa amanzi okanye irhasi kunye nokungeyocaustic okanye iikhemikhali eziyonakalisayo
Previous: Ukuthunyelwa kokugqibela ngo-2021
Okulandelayo: Usebenza njani umpu we hop?